सम्बन्ध विच्छेद हुनबाट रोक्ने उपायहरू - Khoj Sanchar
वैवाहिक जीवनमा सम्बन्ध विच्छेदमात्र अन्तिम बिकल्प होइन । हामीले वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नु अघि सकेसम्म हामीहरुको माया ममता कति थियो किन हामी छुट्टिनु पर्दछ भनी राम्रो बिश्लेषण गर्नुपर्दछ। यदि तपाईहरू बीच धेरै माया ममता छ भने सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा सोच्नु मूर्खता हुन्छ । यसैले “डिर्भोस नेपाल डट कम” ले निम्न १० तरिका ले सम्बन्ध विच्छेद रोक्न सकिन्छ भनी सुझाव दिन चाहन्छ ।
लेखक: अधिबत्ता मुना राउत ढकाल
१. सम्बन्ध विच्छेदको सोच नराख्ने
आधुनिक बिश्वमा हामी निकै स्वतन्त्र भएर बाच्न चाहन्छौं । विवाह पश्चात पनि श्रीमान श्रीमती सानो सानो कुरामा झै झगडा गरी आफ्नो स्वतन्त्रता गुमेको महसुस गर्दछौं । यस्तोमा हामीलाई जुनसुकै बेला पनि सम्बन्धविच्छेद गर्दा जीवन राम्रो हुन्छकी भनेर कल्पना गर्दछौं । यस्तो सोच मन बाट हटाउनु पर्दछ । पारिवारिक सम्बन्धमा के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्दछ । सम्बन्ध विच्छेद आफैमा अन्तिम विकल्प होईन ।
३. सम्पर्क स्थापित गर्न खोज्ने
अहिले संसार इन्टरनेटको भएको छ । प्रत्येक दम्पत्ती युवायुवतीहरु स्मार्ट फोनमा र टिभि सिरियलमा व्यस्त हुने गर्दछन् । मानिस भावानात्मक प्राणी हो । आवेग , माया , घृणा जस्ता क्रियाकलापहरू सँगै मानिसको जीवनको सम्बन्धमा अगाडि बढेको हुन्छ । त्यसैले दाम्पत्य जीवनमा भविष्यको योजना, भविष्यको सपना र दुःखपूर्ण जिन्दगीको भोगाई एक अर्कोलाई साटासाट गर्दा पनि निकै आत्मियता र सुखको अनुभव हुन्छ । यसका साथै श्रीमान श्रीमती बीच प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि लगातार तीस मिनेट कुराकानी गर्ने वातावरणले सुमधुर सम्बन्धका लागि सहयोग पुग्छ ।
४. घरखर्च मिलेर गर्ने
वैवाहिक जीवनमा घरखर्चको ठुलो भूमिका हुन्छ । प्रायजसो दम्पतीहरुको घरखर्चमा कुरा नमिलेर मनमुटाव हुने र सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्ने अवस्था सम्म पुगेका हुन्छन् । श्रीमान श्रीमती बीच आफ्नो आम्दानी अनुसार खर्च गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । प्राय महिलाहरुको देखासिखी गर्ने र अन्य व्यक्तिको हेरेर आफ्नो पनि त्यस्तै जीवनशैली भएको हेर्न चाहन्छन् । यसरी श्रीमानको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा हुँदै नचाहिदो माग गर्दा सम्बन्ध बिग्रिन जान्छ ।
५. परिवारको लागि समय दिने
प्राय सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा सधै काममा लागिरहने व्यक्तिको हुने गर्दछ । श्रीमान श्रीमती दुवैले एक अर्कोलाई समय दिनु पर्दछ। वैवाहिक सन्तुलन कायम राख्न श्रीमान श्रीमतीले एक अर्कालार्इ पर्याप्त समय दिनु पर्दछ। जस्तै गर्भ रहेको अवस्थामा श्रीमतीले आफूलार्इ श्रीमानले बिशेष हेरचाह गरोस् भन्न चाहन्छन् । यदि तपाईले त्यस्तो अवस्थामा हेरचाह गर्ने समय दिनु भएन भने त्यसले नै तपाईहरूको सम्बन्धमा फाटो ल्याउने काम गर्दछ । प्रायजसो श्रीमतीहरूमा सम्बन्ध विच्छेदकोविचार श्रीमानले परिवारलाई समय नदिंदा आउने गरेको देखिन्छ ।
६. तुरुन्त माफ गर्ने
मानिसको जीवनमा सबै सोचेजस्तो हुँदैन । मानिसले चाहेर नचाहेर पनि विभिन्न गल्ती गरिरहेका हुन्छन् । दाम्पत्य जीवनमा पनि त्यस्तो धेरै गल्ती भईरहेको हुन्छ । त्यस्तो गल्तीलाई माफ गर्नु पर्दछ । जीवन साथीको प्रत्येक गल्तीलाई माफ गरिदिनु पर्दछ । कसैले एकचोटीको गल्तीलाई सदैव सम्झेर सधैंभरी झगडा गर्दासम्बन्धमा नराम्रो हुने र सम्बन्धमा चिसोपना आउछ । सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी अनुसन्धानले समेत मनमा तुष राख्ने बानीले नै सम्बन्ध विच्छेद बढाउने कार्य गर्दछ भनेको छ।
७. एक आपसमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगर्ने
पारिवारिक जीवनमा नियन्त्रणले नराम्रो स्थिति सृजना गर्दछ । श्रीमान श्रीमती बीच एकआपसमा हुने नियन्त्रणले निजहरूको स्वतन्त्रता हनन् हुने गर्दछ ।साथै नियन्त्रणले जीवनमा प्रगति गर्ने नयाँ सोच एवं जाँगरलाइ नष्ट गर्दछ । त्यसैले जोकसैले पनि आफ्नो जीवनसाथीलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास नै नगर्नु उत्तम हुन्छ।
८. समयमै परामर्श लिने
परिवार समाजको महत्वपूर्ण एकाई हो । परिवार विघटन हुँदा समाज र राष्ट्रको समेत अप्रत्यक्ष रुपमा क्षति हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेद जीवनको चुनौतिपूर्णनिर्णय हो । यसबाट बच्चाको र आफ्नै जीवनमा पनि निकै ठूलो असर पुग्छ । त्यसैले यस्तो अवस्था आउनुपूर्वनै विज्ञ कानून व्यवसायीहरु सँग परामर्श गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
९. सम्बन्ध विच्छेद रोक्न शारिरिक तथा मानसिक रुपमा नै तयार हुने
सम्बन्ध विच्छेदले सामान्यतया जीवनमा नकारात्मक असर पार्दछ । यदि श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव आएमा आफ्नो जागीर र अन्य काम छोडेर कसरी सम्बन्ध मजवुत बनाउने भनी शारीरिक तथा मानसिक रुपमा तयार हुनु पर्दछ । श्रीमान श्रीमती दुबैजना एकै टेबुलमा बसेर दुबैजनाको कमजोर पक्ष केलाउनु पर्दछ । यसरी समयमा उक्त कार्य गर्नु भएमा सम्बन्ध विच्छेद हुन बाट रोकिन्छ।
१०. परस्परमा जवाफदेही हुने
वैवाहिक जीवनमा जवाफदेहिताको ठूलो महत्व रहन्छ । श्रीमान श्रीमती बीच जुन बिषयले विवाद र मनमुटाव ल्याएको छ , त्यस्तो मनमुटावको विषयलाई एक आपसमा स्पष्टरुपमा राख्नु पर्दछ । विवाहित जोडीहरुले आफ्नो गल्ती र मनमुटाव हुनुको स्पष्ट जवाफ दिनु पर्दछ।
बिज्ञापनकी सानी नानी र हाम्रो व्यवहार